Torolàlana ho an'ny fahapotehana ny fanatanjahan-tena vehivavy - ny Profesora John Whitehall
Ireo fitaovana fampianaran'ny ideolojia.
Miompana amin'ny ara-tsosialy ny Gender Dysphoria - Prof Dianna Kenny.
Dr. Kosky dia nitondran'ny ankizy 8 ny fananana Dysphoric. Ity no tatitra navoaka tao amin'ny gazety an-gazety Australian.
Manara-maso akaiky ny olona transsexual miady amin'ny fandefasana famerenana ny firaisana ara-nofo: Cohort Study inSweden
Ity fandalinana maharitra ity dia namarana fa ny famerenam-panodinana ara-pananahana dia miteraka famonoan-tena.
Firaisana ara-pananahana sy lahy sy vavy - Dr. Paul McHugh. 2016 Tatitra momba ny fitsaboana Transgenderism John Hopkins momba ny Transgenderism.
Ny kambana reimer - ny tantaram-piraisan'ny firaisana mahatsiravina
Boky izay miresaka momba ny firehan-kevitra momba ny lahy sy ny vavy ankehitriny dia apetraka amin'ny fiaraha-monina.
Kitapom-bolan'ny Transgender ho an'ny mpampianatra.